सन्तान चाँडो चाहनेले यस्ता आशनमा सेक्स गर्नुस् ~ The Nepal Romania
4:24 AM स्वास्थ्य/यौन No comments
मानव जीवनमा सेक्सको ठूलो महत्व छ । मानिसले सेक्स आफ्नो यौनचाहना मेटाउन तथा सन्तानप्राप्तिको लागी गर्ने गर्छ । सेक्सको अन्तिम प्राप्ति भनेको सन्तानप्राप्ति हो । मानिसले गर्ने सेक्स पहिले आनन्दका लागी हुन्छ भने मानिसलाई आवश्यकता महसुस भएपछि त्यही सेक्सलाई सन्तानप्राप्तिको बाटोमा लैजान्छन् सेक्स जोडी । तर सन्तान प्राप्ति हुनु त्यति सहज भने छैन् । सबै जोडीले चाहेको समयमा सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छन् । जोडीको सेक्सका दौरान हुने केहि गल्तिका कारण पनि सन्तान प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ । सेक्सका क्रममा प्रयोग गरिने आशनले पनि सन्तान प्राप्तिको समयलाई प्रभावित पार्न सक्छ । महिलामा पुरूषको विर्य सहज रूपमा पुग्न नसक्दा सन्तान प्राप्ति नहुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले यसको निदानका सेक्सका समयमा केहि आशनहरू समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया सेक्स जोडीले जुनसुकै आशन प्रयोग गर्दा पनि सन्तान प्राप्तिको लागी आव्शयक विर्यको महिलामा प्रवेश हुन्छ तरपनि सहज सन्तान प्राप्तिको लागि केहि आशनहरु गर्नु अझ राम्रो हुन्छ जसले सेक्स जोडीले चाहेको समयमा सन्तान प्राप्त गर्न सक्छ । केही आशनहरू यस्ता छन्:
१. मेसिनरी पोजिसन: सम्भोगका समयमा पुरूषमाथी र महिला तल भएर गर्दा सन्तान प्राप्तीको लागि सबैभन्दा सहज हुने बताइन्छ । महिलाको योनीमा पुरूषको लिङ्ग प्रवेश गराउँदा यो
पोजिसनमा सबैभन्दा भित्रसम्म पुग्ने भएकाले विर्य उचित स्थानसम्म सहजै पुग्ने हुनाले यो पोजिशन निकै राम्रो मानिन्छ ।
४. साइड बाइ साइड: पुरूष र महिला साइड बाई साइडको अवस्थामा बसेर सेक्स गर्नुपनि फाइदाकर हुन्छ । यहाँ जस्ता आशनलाई उपयुक्त मानिएपनि सन्तान जन्माउनका पुरूष तथा महिला दुवै परिपक्क हुनु आवश्यक हुन्छ । परिपक्क नभइ गरिएको सन्तानको इच्छाले गाह्रो स्थिति समेत पैदा गर्न सक्छ । सन्तान जन्माउनका लागि यी आशन मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन् तर यी आशनले सहजता प्रदान गर्छ भन्ने मात्र हो